एमालेभित्र प्रचण्डको बहुमत, अध्यक्ष नदिए ओलीकै प्रस्तावमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री ! — JagaranMedia.Com
प्रदेश पाँचको बजेट : दलित छात्रालाई मासिक १ हजार छात्रबृत्ति छात्रबृत्ति, परम्परागत सिपका लागि २ करोड
एमालेभित्र प्रचण्डको बहुमत, अध्यक्ष नदिए ओलीकै प्रस्तावमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री !
जागरण मिडिया प्रकाशित : २०७४/९/१८ गते
वाम गठबन्धनको सानो घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एकीकरणपूर्व नै नेकपा एमालेभित्र बहुमतमा रहेका छन् । अब बन्ने सरकारको प्रधानमन्त्री पदमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रस्ताव गरेका प्रचण्डले एकीकरणका क्रममा पार्टी अध्यक्षमा दाबी गरेका छन् ।
माओवादीले सरकार र पार्टीको नेतृत्वमध्ये एक आफूले पाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ । नेताहरूका अनुसार यसविषयमा विभिन्न विकल्पमा अहिले छलफल भइरहेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका नेताहरूले निर्वाचनमा नेपाली जनताले एमाले र माओवादीबीच हुने एकतालाई मतदान गरेको भन्दै दुवै पार्टीका तलदेखि माथिसम्मका नेताहरूको शक्ति बाँडफाँट प्रभावकारी हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । तर प्रचण्डले पार्टीको अध्यक्ष पद पाए अन्य पदमा सम्झौता गरेरै पनि अघि बढ्नसक्ने संकेत देखाएका छन् भने सत्ता समिकरणमा भने सन्तुलन कायम राख्नुपर्ने प्रस्ताव अघि राखेका छन् । ‘पार्टी एकताका लागि सिद्धान्त विचारधारा मिलिसकेपछि नेतृत्व प्रणालीमा पनि मिल्नुपर्दछ । पावर सेयरिङ प्रमुख नेताहरूदेखि अन्य नेताहरूको पनि माथिदेखि तलसम्म मिलाउनुपर्छ । अनि प्रभावकारी एकीकरण हुन्छ’, माओवादी नेता गिरीराजमणि पोखरेलले भने,‘सरकार एमाले नेतृत्वले लिए पार्टीको नेतृत्व प्रचण्डले स्वभाविक रूपमा पाउनुपर्छ ।’
माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टी एकताको लागि एजेन्डा तय नहुँदा पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक बस्न नसकेको बताए । तर नेतृत्व बाँडफाँटको विषयमा नै ओली खुलस्त नहुँदा यो समस्या आएको बताइएको छ । पछिल्लो पटक ओली निकटका नेता शंकर पोखरेलले पार्टी नेतृत्व संयुक्त हुने नयाँ कार्ड फ्याँकेका छन् ।
जनप्रहार साप्ताहिकका अनुसार अध्यक्ष ओली भए त्यसमा सहअध्यक्षका रूपमा प्रचण्डलाई नेतृत्वले स्वीकार्नसक्ने उनको संकेत थियो । तर, प्रचण्डले सहायक भुमिका भन्दा पनि कार्यकारी पद नै खोजिरहेका छन् । उनले भने,‘दुई कार्यकारी मध्ये एक माओवादीले पाउनुपर्छ ।’ यसको अर्थ एमालेलाई सरकारमा पठाएको खण्डमा पार्टी अध्यक्षको जिम्मा प्रचण्डले नै पाउनुपर्ने हो । पार्टीको नेतृत्व नत्यागे ओलीले प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई अघि सार्नुपर्ने संकेत देखिएको छ ।